Dilkii Kamas Dhabar iyo Rooble oo ay ka Dambaysay Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Dilkii Kamas Dhabar iyo Rooble oo ay ka Dambaysay Kooxda Jwxo-shiil
Feb 7, 2011 Dilkii Kamas Dhabar iyo Rooble oo ay ka Dambaysay Kooxda Jwxo-shiil, Jwxo-shiil
Garrissa, [ras] Feb 7, 2011 – War aanu ka helay magaalada Garrissa ee dalka Kenya, ayaa sheegaya in ay ciidanka Booliska ee dalka Kenya ay gacanta ku dhigeen dablaydii dilka ka gaysatay xerada qaxootiga ee IFO. Dablaydaas oo ay wali ku socoto baadhis ayey warwarka hor dhaca ah ee ka soo baxayaa sheegeen in arinta dilkan ay ka dambeeyeen xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil.
Hubka ay dambiga ku galeen dablaydu ayaa waxaa laga soo talaabiyey xadka Somaliya, waxaana soo diray ururka argagixisada ah ee Alshabaab, waxaana hubka xerada soo gaadhsiiyey qaar ka mid ah kooxda Jwxo-shiil.
Waxay wararku sheegayaan in xerada Qaxootiga ee Dhadhaab ay ka baxsadeen xubno dhawra ah oo wakiil uga ahaa kooxda Jwxo-shiil iyaga oo u baxsaday dhinaca xadka Somaliya.
Kamas Dhabar, oo wakiil u ahaa kooxda Jwxo-shiil, dambiyo badana ku galay magaca kooxdan, ayaa baryahan dambe ka soo horjeedsaday Jwxo-shiil. Dilka Kamas ma ah kii ugu horeeyey, mana aha kii ugu dambeeyey ee uu Jwxo-shiil, u gaysto dadka isaga la shaqeeya.
War Deg Deg ah: Laba Nin oo Hore Isugu Dayey in ay Dilaan Dr. M S Dolal iyo Eng. Salaxudin Cabdiraxmaan, oo Maanta Lagu Dilay Xerada Qaxootiga ee Dhadhaab.